Ugcino lwe-GBP / CAD
Udidi: IGBP / CAD
I-GBP / i-CAD yeXesha eliPhambili!
Ixabiso le-GBP / i-USD lalikwindawo yokuphumla yethutyana emva kokuthatha uxhathiso olukhulu olutshintshayo. Aba babini banokutsiba phezulu emva kokwehla kwangoku.
Isenzo sexabiso sibonakalise ukuba ukwehla kwexesha elifutshane kuphelile kwaye iinkunzi zeenkomo zingathatha ulawulo olupheleleyo kwakhona. I-GBP / i-USD iya kuqhutywa zizinto ezisisiseko ngomso, i-UK kunye ne-Canada ziya kukhupha i-CPI kunye nedatha yeCore CPI, amanani e-inflation. Ukuguquguquka kunokuba yinto enkulu kwezi ziganeko zinempembelelo ephezulu.
Uhlalutyo lwe-GBP / CAD lobuGcisa!
I-GBP / i-CAD ayiphumelelanga ukuvavanya kwaye iphinde iphinde yehle umgca we-pitchfork's median line (ML) ebonisa abathengi abomeleleyo. Ifumene inkxaso kwinqanaba le-pivot point (1.6976) yeveki. Ukuqhekeka okusebenzayo ngokusebenzisa umgca we-downtrend kwangoko kunokubhengeza ukukhula okunokubakho.
Ngethuba elifutshane, i-bias ihlala iqhubekile njengoko ixabiso limi ngaphakathi komzimba we-pitchfork. Ukutsiba kunye nokuzinzisa ngaphezulu komgca we-median (ml) kunokubonisa ukukhula okunokubakho ubuncinci kude kube semgceni ophezulu we-median (uml).
Ukwehla kwethutyana kubonwa njengephethini yokuqhubeka okuphezulu. Indawo ephezulu ephezulu inokuvula intshukumo ebanzi ebheke phezulu.
tags Forex, gbp / cad, ukuseta urhwebo
Ukuchasana kwamadabi e-GBP / USD kwinqanaba le-1.4000, ngoMeyi aqhubeke kwakhona no-Uptrend
IGBP / USD Iyenyuka ukuzama ukuphinda ikwazi ukuxhathisa kwinqanaba le-1.4000. Ukuchasana kuhlala kungaphazanyiswa ukusukela nge-25 kaFebruwari. Ngeli xesha, nge-Epreli 20, esi sibini sachaswa kodwa umzimba wekhandlela owabuyisa umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-50% yeFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba iphawundi inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-2.0 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-1.4334. Ukusuka kwinqanaba lentengo, iPound inyukile yaya kwinqanaba le-1.3906.
Iintsuku ezingama-21 kunye nee-50-ii-SMAs zijike phezulu zibonisa umda. Iphawundi ikwinqanaba lama-53 lamaxesha aMandla aHlanganisiweyo 14. Ibonisa ukuba isibini sikwindawo ephezulu kwaye siyakwazi ukunyuka.
I-GBP / i-USD yeXesha leXesha eliPhakathi: Ukutshintsha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini siye sahamba kwicala elingaphantsi kwinqanaba le-1.4000. Ukusukela nge-Epreli 20, iinkunzi zeenkomo kusafuneka ziphumle inqanaba lokumelana. Nge-Epreli 20 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini sinokuphakama siye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye kwinqanaba le-1.4295.
Isibini se-GBP / USD okwangoku singaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Iponti ikwisantya esiphakamileyo. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zijike phezulu zibonisa inkqubela phambili.
I-GBP / USD ithengisa ngaphantsi kokuchasana kwinqanaba le-1.4000. Ukunyuka okuphezulu kuyekisiwe ngenxa yokuxhathisa ngaphezulu kwinqanaba le-1.4000. Okwangoku, imakethi iyatshintsha phakathi kwenqanaba le-1.3800 kunye ne-1.4000.
I-GBP / i-CAD yokuGuqula ukuGuqulwa kwiiKhadi kwakhona!
I-GBP / i-CAD ime kwinqanaba le-1.7466 ngexesha lokubhala ukubonisa abathengi abomeleleyo. Rally yanamhlanje enoburharha inokuzisa amathuba amatsha. Ixabiso liphantse liphume ngokuhamba ecaleni.
Le meko inokubhengeza ukukhula okungaphambili. Iphawundi inamandla amakhulu kwixesha elifutshane kwaye inokuthatha ulawulo olupheleleyo. Ukwehla kwe-GBP / CAD kubonakala ngaphezulu, yiyo loo nto sinokukhangela amathuba amade.
Uhlalutyo lobuchwephesha lwe-GBP / CAD H4!
I-GBP / i-CAD ibhalise kuphela ukuwohloka okungamanga nge-61.8% yenqanaba lokubuyisela ukubonakalisa abathengisi abaphelile. Ngoku ucinezela i-1.7435, i-R2 (1.7442), kunye nenqanaba le-Fibonacci lama-38.2%.
Ukuvala nokuzinzisa ngaphezulu kwale miqobo iphambili kunokubangela ithuba lokuthenga. Ixabiso liqinisekisile ukunyuka kwefoloko kunye nokuqhekeka kwayo okungekhoyo kumgca ophakathi (lml).
I-GBP / i-CAD ikwazile ukutsiba ngaphezulu ngaphezulu komgca ophakathi (ml) kodwa asinakho ukubekela ecaleni ukubuyela kwakhona ngaphambi kokuphinda inyukele phezulu.
Ukwaphuka okungafunekiyo kuluhlu olunqamlezileyo kubonakalise ukuphuma okuphezulu okusebenzayo. Ukuqhawuka okusebenzayo ngaphezulu kweethagethi eziphezulu kwangoko kunokuqinisekisa ukuqhubeka kokuqhubela phambili.
tags Cad, Forex, IGBP, gbp / cad, Uhlalutyo Technical